मस्तिष्क घातका बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पताल पुर्‍याइए निको पार्न सकिन्छ : न्युरोलोजिस्ट डा. अभिनाश चन्द्र (भिडियो) Canada Nepal
मस्तिष्क घातका बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पताल पुर्‍याइए निको पार्न सकिन्छ : न्युरोलोजिस्ट डा. अभिनाश चन्द्र (भिडियो)
पछिल्लो समय मस्तिष्क घातका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ । जुन सुकै उमेरमा समूहमा देखापर्ने थालेको यो मस्तिष्क घात ठूलो समस्याको रुपमा देखिन्छ । विशेषगरी खानपान र जीवनशैलीका कारण पनि मस्तिष्क घातका बिरामी बढ्न थालेका छन् । सामान्यतया मस्तिष्कघात भन्नाले मस्तिष्कमा आघात पुग्नुलाई भनिन्छ । मस्तिष्कघात प्रायजसो एक्कासी हुन्छ । यो दुई किसिमका हुन्छन्, हेमोरेजिक स्ट्रोक र इस्केनिक स्ट्रोक । हेमोरेजिक स्ट्रोक भन्नाले मस्तिष्कको रगतको नली फुटेर ब्रेनमा रगत नपुग्नुलाई भनिने न्युरोलोजिस्ट डा. अभिनाश चन्द्रले क्यानाडानेपाललाई जानकारी दिए । उनकाअनुसार ब्रेनको नशामा रगत थुनिएर रगतको मात्रा कम हुँदा मस्तिष्कमा आघात पुग्छ, जसलाई इस्केनिक स्ट्रोक भनिन्छ ।
मस्तिष्कघात हुने कारण थुप्रै हुन्छन् । उच्च रक्तचाप बढ्नाले पनि मस्तिष्कघात हुन्छ । मुटु रोग रोगीलाई पनि मस्तिष्क घात हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यससँगै मधुमेहका रोगीदेखि धूमपान सेवन गर्ने तथा मोटापन भएकालाई पनि यो समस्या देखापर्ने सम्भावना प्रवल हुन्छ । विशेषगरी खानपान र जीवनशैलीको कारणले पनि मष्तिस्क घात हुने सम्भावना बढी हुने डा. चन्दको भनाइ छ ।
लक्षण – रिंगटा लाग्नु, मुख बाङ्गिनु, हातखुट्टा नचल्नु, एक्कासि एउटा हात लुलो हुनु, बोली लरबराउनु वा स्वरै गुम्नु, दृष्टिमा अचानक समस्या उब्जिनु, कुरा बुझ्न अप्ठयारो हुनु
सुझाव– माथिका लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकैको अस्पताल जानु पर्ने डा. अभिनाश चन्दले सुझाव दिएका छन् । यदी ३ घण्टा भित्र अस्पतालमा पुर्‍याउन सकियो मस्तिष्कघातका बिरामीलाई निको पार्न सकिन्छ । तुरुन्त अस्पताल पुर्‍याइएका मस्तिष्कघातका बिरामीलाई ‘टिपीए’ नामक औषधिको प्रयोगबाट निको पार्न सकिने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यदि समयमै बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन सकिएन भने उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ । अझ रगतको नशा फुटेका हेमोरेजीक स्ट्रोकका बिरामीलाई औषधि चलाउन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा एमआरआई, सिटीस्क्यान गर्दै नशा फुटेको देखियो भने अप्रेशन गरेर रगत झिक्नु पर्छ र औषधिहरु चलाउनु पर्छ ।
मतिष्कघातका बिरामी पूर्ववत् अवस्थामा आउन कति समय लाग्छ ?
विशेषगरी मष्तिस्क घातमा हुने हातखुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गिने, बोली हराउने समस्या भएका बिरामीमा उमेर ढल्कँदै गएपछि नशा परिपक्क हुन्छ । नयाँ नशा नआए पनि नशाको काम मोडिफाइ हुन्छ । तर मष्तिस्कघात भएको मानिस पहिलाको अवस्थामा आउन भने सक्दैन । केहि मात्रामा सुधार चाहिँ हुन्छ । मतिष्क घात भएका बिरामीले के खाने ? के नखाने ?, यसको उपचारका विधिसहित समग्रमा क्यानाडानेपालकी ज्ञानु दुलालले न्युरोलोजिस्ट अभिनाश चन्द्रसँग गरेको यो भिडियो अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्
कार्तिक १८, २०७६ सोमवार ०९:४६:०० बजे : प्रकाशित